Posted by သက်ဝေ at 3:32 PM
Ko Paw March 9, 2009 at 4:11 PM
ကျနော်တို့ လင်မယား နောက်ဆုံး ငှားနေခဲ့တဲ့ အိမ်နားက သစ်ပင်မှာ ဥသြနှစ်ကောင်ရှိတယ်။ မနက်စောစောစီးစီး အိပ်ယာထဲမှာ ကျနော်တို့ ဇိမ်နဲ့ နှပ်ကောင်းနေတုန်းဆိုရင် သစ်ပင်ပေါ်က အဲသည် ဥသြ နှစ်ကောင်ဟာ တကောင်နဲ့တကောင် ထိုးကြဆိတ်ကြ ရန်ဖြစ်ကြဟန်တူပါရဲ့။ မနက်တိုင်း သာယာနာပျော်ဖွယ်အလျဉ်းမရှိတဲ့အသံသေးအသံကြောင်တွေနဲ့ အော်ကြဟစ်ကြတော့ ဥသြသံဆိုရင် အဲသည်တလောက မုန်းတောင် မုန်းမိတယ်။
ဟိုတနေ့က ရီးဒါးဒိုင်ဂျက်စ် အဟောင်းတအုပ်ထဲမှာ ဖတ်လိုက်ရတယ်။ အာရှမှာ ပတ်ဝန်းကျင် ဆူညံမှု လယ်ဗယ်ဟာ အရမ်းမြင့်တက်နေပြီး အကြားအာရုံကိုတောင် ထိခိုက်နိုင်တယ်တဲ့။ ဥပမာ စားသောက်ဆိုင်တခုထဲမှာ ညစာ စားတယ်ဆိုရင် စားသောက်ဆိုင်နဲ့မတူပဲ အလုပ်ရုံတခုထဲရောက်နေသလို ဆူညံနေတယ်တဲ့။ ဇွန်းသံ၊ ပန်းကန်သံ၊ စကားသံ စသဖြင့်။ လူတွေကလည်း အသံတွေကို လွှမ်းအောင် အသံကိုမြှင့်ပြောရင်းပြောရင်းနဲ့ အရမ်းဆူတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကြီး ဖြစ်လာသတဲ့။
sonata-cantata March 9, 2009 at 5:41 PM
တလောကပဲ ဖြစ်နေတာတွေ ချရေးကြည့်သေးတယ် သက်ဝေလိုတော့ ပေါ်လွင်အောင် မရေးတတ်ဘူး။
အသံတွေကို ကြောက်နေမိသည်။ ဘာသံကိုမျှ မကြားချင်။ ကိုယ့်အသံကိုယ်ပင် ကိုယ်မကြားချင်။ တနေ့လုံးလိုလို တံခါးပိတ်၍ အခန်းထဲတွင် တစ်ယောက်ထဲနေသည်။
ညနေစောင်းလျှင် တစ်မိုးအောက်ထဲနေသော သူတစ်ယောက်ပြန်လာသည်။ ထမင်းပွဲပြင်ပြီး ထမင်းစားကြသည်။ ထိုသူကစကားတွေ ပြောသည်။ ဘာတွေပြောနေသလဲ မကြားမိ။ မေးခွန်းတစ်ချို့ သူကမေးပြန်သည်။ မေးခွန်းတိုင်းကို I don’t know ဟူသော တစ်ခုတည်းသော အဖြေသာ ပေးနေမိသည်။
ကံကောင်းတာက မသီတာ စိတ်က အတက်အကျ သိပ်မြန်တယ်။ အခုတော့ သိပ်မစိုးတော့ပါဘူး။
သက်ဝေလည်း "အမြန်ဆုံး ပျော်ပါစေ။"
strike March 9, 2009 at 6:10 PM
Welcome March 9, 2009 at 6:26 PM
စိတ်တွေ တည်ငြိမ်အေးချမ်းဖို့ လိုတဲ့ အချိန်တိုင်းမှာ .. ..
ဘာလုပ်သင့်ပါသလဲနော် .. ..
(အာနာပါန) ရှုမှတ်နည်းလေး ကျင့်ကြည့် ပါလားအစ်မ။
(အာနာပါန)ရဲ့ မူရင်းအဓိပ္ပာယ်ကတော့ (ထွက်သက်၊ ၀င်သက်) ဖြစ်ပါတယ်။ ပါဠိလို (အဿာသ ပဿာသ)လို့လည်းခေါ် ပါတယ်။
မြန်မာလို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆို ရင်တော့ အသက်ရှူတဲ့အခါ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ (ထွက်လေ၊ ၀င်လေ သဘော)ကို စိတ်အာရုံထဲမှာ စူးစိုက် ရှုမှတ် အားထုတ်တဲ့ နည်းကို ခေါ်ပါတယ်။ စိတ်ကို တည်ငြိမ်အောင် လုပ်နိုင်တဲ့ အလွယ်ဆုံးနည်းလေးပေါ့ ..
သောက ကင်းဝေးလို့ စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနဲ့ ပြည့်စုံပါစေ ..
khin oo may March 9, 2009 at 7:23 PM
တယ်လီဖုံးအလမ်းကို ပြင်၍ မရပါ။ ကြိုတင်စောထက အလမ်းကို ဦးအောင် ပိတ်လိုက်နိုင်ပါသည်။
ရေခဲသေတာကို တခြာူေးရခဲသေတာ ပြောင်းရန်.အစ်မ အိမ်က ရေခဲသေတာ ဘာသံမှမထွက်ပါ. တစ်ခါတစ်လေ ပိတ်တာ အံမကျလဲ သူ့ဘာသာ ဘဲ သူ ငြိမ်ငြိမ်ကလေးနေပါသည်.
အဝတ်လျော်စက်ထည့်ပြီးပါက ထပ်မဖွင့်ခြင်းဖြင့်ကာကွယ်နိုင်သည်. မဖွင့်က မအော်ဟု သက်ဝေပြောသည်မဟုတ်လား
ကြားထဲမှာ အဝတ်ပျော့ဆေးထဲ့စေချင်ရွေ့အော်တာ ကိုတော့နားမလည် တို့အိမ်က စက် အဲဒီ အဆင့်မပါဘဘာ။။သို့ဖြစ်ရွေ့အဝတ်လျော်စက်ကုလည်း နိုဒယ် နိမ့်တာ ရွေါ်းပါ။
မိုက်ခရိုလေး အဲလိုဘဲ တို့အိမ်က တခါဘဲ အထွက်မှာ မည်တ်ာယ သက်ဝေစက်တွေ က အဆင့်သိတ်မြင့်နေတယ်။ တို့ဆို ထည့်လိုက်တယ်။သူမမည်ခင်မှာ ပြနထုတ်လိုက်တယ်။ နားကိုအေးလို့
အဓိကကတော့ သက်ဝေ အခုလောလောဆယ် stress level တက်နေ၍သော်လေည်းကောင်း မိန်းကလေး သဘာဝ သွေးသားမမှန်ရွေ့သော်လေည်းကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။
khin oo may March 9, 2009 at 7:27 PM
JuneOne March 9, 2009 at 8:09 PM
အသံတွေထဲ မှာအမုန်ဆုံးအသံက သတင်းစာတို၊ဘာတို့ အဟောင်းတွေလိုက်သယ်သော.
သားလေးနိုးသောကြောင့် အမြဲစိတ်တိုရသည်။သို့သော်လည်း သူ့စီးပွားပေမို့ မတတ်နိုင်။
Kay March 9, 2009 at 9:57 PM
အော်..မသက်ဝေက.. ၂၁ရာစု နေထိုင်မူ နဲ့ စင်ကာပူမြို့ကြီးကို နားညီးနေတာပါလား။
နေအုံး..စစ်ကိုင်းချောင် ခဏသွားလိုက်.. ပြီးမှ လွမ်းတယ် တော့..မလုပ်နဲ့..း)
myo March 10, 2009 at 12:00 AM
tg.nwai March 10, 2009 at 1:01 AM
ဟုတ်မယ်..သက်ဝေ..တို့တွေ အသက်အရွယ်ပိုင်းမှာ ဒီလိုဖြစ်တာလားမသိဘူးနော်.. အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးတွေ.. အသံကို နားခံလို့မရဘူး.. ဘာသံပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်နားထဲမှာ တအားဆူညံနေသလိုပဲ..။ ဒါတောင် သက်ဝေက အဲဒီအသံတွေနဲ့တင်..။ တို့မှာတော့ ကလေးတွေ ရီသံ.ငိုသံ၊ ရန်ဖြစ်သံ..ပြီး မီးစက်သံဆူဆူညံညံ၊..အမယ်လေး.. အဲဒီအသံတွေကို တအားစိတ်ကုန်တာပါပဲ..။ တခါတလေ..တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ် တယောက်ထဲ နေရတာ သိပ်ငြိမ်းချမ်းတာပဲ...။
ဒီ အသံပို့စ်လေးအတွက် ကျေးဇူးပါပဲ သက်ဝေရေ..။ ကိုယ်တယောက်ထဲ မဟုတ်ပါလား သိခွင့်ရလိုက်လို့... :)
strike March 10, 2009 at 1:17 AM
Yu Wa Yi March 10, 2009 at 1:40 AM
အသံတွေကြောင့် စိတ်ညစ်နေတဲ့ အစ်မသက်ဝေကို မှတ်ချက်သံလေးတစ်ခု ၀င်ပေးခဲ့ပါသည်။ ငြိမ်းချမ်းပါစေ အစ်မရေ။
မီယာ March 10, 2009 at 4:17 AM
အမရေ.. ပြောလို့ပြောတာ မဟုတ်ပါ.. မီယာတို့ စင်ကာပူသွားတိုင်း ညဖက် အိပ်လို့မရပါ။ တည်းတဲ့ အိမ်က Jurong က HDB flat မှာပါ။ အသံမျိုးစုံ ကြားရလို့ မနက်ဆို ခေါင်းက နာနေပါတယ်.. ရထားပေါ်မှာလည်း ဖုန်းတွေက တချိန်လုံး မြည်နေသလိုပဲ..
nu-san March 10, 2009 at 11:36 AM
မမသက်ဝေပြောထားတဲ့အသံတွေကို ကျနော်လည်း မကြိုက်ဘူး.. အင်း.. မုန်းလောက်အောင်တော့ မဖြစ်သေးဘူး..ဒါပေမယ့် အပေါ်ထပ်ကနေ ခုံဒရွတ်တိုက်ဆွဲတဲ့အသံဆိုရင် အိပ်နေရင်းက လန့်လန့်နိုးလို့ ဒေါသ ထွက်တယ် အမရေ.... လူသူ အိပ်ချိန်ကြီး အလိုက်မသိရ ကောင်းလားဆိုပြီးတော့.. :)
ပုံရိပ် March 10, 2009 at 11:42 AM
ပုံရိပ်တော့ alarm သံကို အမုန်းဆုံး။ တခါတလေ ကြားရတာ ရင်တုန်တယ်။
Moe Cho Thinn March 10, 2009 at 1:38 PM
ချိုသင်းတော့ သိပ်သတိမထားမိဘူး မမရေ။ ကိုယ်ကလဲ ကိုယ့် own sound track နဲ့ကိုယ် ပြန်ဆူနေလို့လား မသိ။ :)
စာရေးတဲ့အချိန်တော့ တီဗီသံတွေ မကြားချင်၊ နည်းနည်းလေး တိုးပေးရင် အိုကေပါတယ်။
ဒီမှာ နားညည်းအောင် ကြားနေရတာက 911 ပုလိပ်ကား၊ မီးသတ်ကား ဥသြဆွဲသံ မမရေ။ သူ့အသံကြားရင် ရင်ထိတ်လိုက်တာ။ အဖေဆုံးတုန်းက ဗြုန်းကနဲမို့ 911 ခေါ်ရတာဆိုတော့ အဲဒီလိုမျိုး လူအသက် ကယ်နေတယ် ထင်ပါရဲ့လို့ စိတ်ဖြေယူရတယ်။ အသက် မီပါစေ ပေါ့။
ကလူသစ် March 10, 2009 at 11:05 PM
alarm မပေးပါနဲ့၊ အ၀တ်မလျှော်ပါနဲ့၊ ဟင်းမနွေးပါနဲ့၊ ရေခဲသေတ္တာထဲ ဘာမှထည့်မထားပါနဲ့။ ဒါဆို စိတ်နောက်စရာ အသံတော်တော်လျော့သွားလောက်ပြီ။ စေတနာနဲ့ အကြံပေးတာ ကျေးဇူးတင်ရင် ဘီယာတိုက် :)
အပြုံးပန်း March 11, 2009 at 8:29 PM
အားလုံးဟာ သက်ဝေ (သက်ဝေလို့ပဲ ခေါ်ပါရစေနော်)
အေးချမ်းတဲ့ ကိုယ်နေချင်တဲ့ အိမ်လေးမှာ
ဖုန်းသံလေးကိုတော့ ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့ အသံလေးပြောင်းကြည့်လိုက်ပါလား။
strike March 12, 2009 at 2:02 AM
စိတ်လျှော့အမရေ စိတ်လျှော့၊ကိုယ်မှဘာမှမတတ်နိုင်တာကိုး ဟုတ်။
Hmoo March 12, 2009 at 10:12 AM
I like it,that's really importance of human life
U R wonderful Ma Thet Wai,U can point out that..
တန်ခူး March 12, 2009 at 1:49 PM
သက်ဝေရေ… ဒီရောက်ခါစ ကျောင်းတက်တုန်းက စာမေးပွဲနီးရင် စိတ်ပင်ပန်းလို့ထင်တယ် ဒီက စလုံးမတွေ စကားပြောတဲ့ တရုတ်သံကို မခံနိုင်ဘူး… ဘယ်လောက်ဆိုးလဲဆို တခါတခါ ငိုတောင်ငိုချင်တယ်… အဲဒီအသံတွေကြောင့်… စာမေးပွဲနီးတော့ ပြန်ကောင်းသွားပြန်ရော… စိတ်ပင်ပန်းတာနဲ့ ဆိုင်မယ်ထင်တယ်… အိမ်က ရေခဲသေတ္တာကတော့ တခါတလေ ပွင့်နေမှန်းမသိလို့အခိုးတွေ ထွက်မှ သတိထားမိတယ်… မိုက်ကရိုဝေ့ဖ်က အဲလိုလေးလား… settingကို ကိုယ်ကြိုက်သလို လုပ်လို့ ရဘူးလား… ဥသြကိုတော့ မုန်းပါနဲ့ သက်ဝေရယ်… သူ့ ခမျာ ရာသီမရှိတဲ့ တိုင်းပြည်မှာ အူကြောင်ကြောင်ဖြစ်သွားရရှာတာပါ… ခုလောလောဆယ် တို့ မုန်းတဲ့အသံက ရထားသံ… အိမ်က ရထားလမ်းဘေးဆိုတော့ ဆူညံနေတာပဲ… ခါတိုင်းချိန် မသိသာပေမယ့် idolကြည့်တဲ့အချိန်ဆို သိပ်ဆိုးတာ… သက်ဝေတို့အိမ်နားလေးက ငြိမ်းချမ်းလွန်းလို့အဲဒီပြောင်းလာရမလားတောင် စဉ်းစားနေတာ…
khin oo may March 14, 2009 at 9:43 AM
strike ကသုံးခါတောင် အားပေးထားတာ သက်ဝေရယ် ပြုံးလိုက်တော့နော်။